Monomer PI, Dianhydride, diamine- Daeyeon
Isniin - Sabti saacaddu markay tahay 9:00 AM ilaa 6:00 AM
CHDA / HPMDA / H6-PDA
BUDA / BDA
Daahirnimo sare 6FDA
PEPA / 4-PEPA
CPDA / TCAAH
TFMB / TFDB
FDA / BAFL
6FAP = Bis-AP-AF
DAPBI / APBIA
APBOA / 5ABO
3,3 -BASP / BAPS-M
DAPE / 3,4 -ODA / 3,4 -DPE
TPE-M / APB
DEDC / ODBC
KU SOO DHAWAADA DALKAAGA
Waxaa la aasaasay 2013, Shanghai Daeyeon Chemicals Co., Ltd. waa shirkad kiimiko xirfadleyaal ah oo diiradda saareysa baarista monomer polyimide iyo horumarka. Shirkadeena waxay fiiro gaar ah siisaa wax soo saarka awooda hal abuurka iyo hagaajinta awooda cilmi baarista iyo horumarka.
arag dheeraad ah nala soo xiriir
arag dheeraad ah
PI monomer-Product cusub
Shanghai Daeyeon Chemicals Co., Ltd.Macluumaadkeena ugu dambeeyay
Waa maxay Polyimide?
Polymer waxaa lagu qeexaa shabakad ballaaran oo molokikolojiyayaal ah oo ka kooban cutubyo badan oo soo noqnoqda. Polyimide waa nooc khaas ah oo polymer ah, kana kooban macaamiisha imide. Polyimides-ka waa kuwo si aad ah loogu baahan yahay iska caabidooda kuleylka, xoogga farsamada, iyo guryaha aan xadidneyn. Waa maxay Imide? Si loo helo ...
Maxaa loo isticmaalaa polyimide? Polyimide waxaa loo isticmaalaa tuubbooyinka caafimaadka, tusaale ahaan tuubooyinka xididada vascular, si ay u adkeyso cadaadiska dilaaca oo ay weheliso dabacsanaan iyo caabbinta kiimikada. Warshadaha semiconductor-ka wuxuu u adeegsadaa polyimide-ka sida kuleylka heerkulka sare; Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii wax wax u dhimaya makaanikada. ...
Maaddaama ay tahay agab qurux badan oo soo jiidasho leh, polyimide waxaa si aad ah loogu isticmaalay garoonka elektaroniga, aerospace, iyo baabuurta fulisa baahiyaha sii kordheysa ee agabyada sifiican u fulin kara xaaladaha adag, sida heerkulka sare. Polyimides waa fasal muhiim ah oo polym-koritaanka ...
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabadayada, fadlan noogu soo dir emaylkaada oo nala soo xiriir 24 saacadood gudahood.